V: Taageerada ardayda oo kor loo qaadey 300 oo koronka Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jonas Sjöstedt (V), hoggaamiyaha xisbiga Bidixda, Vänsterpartiet. sawir: Patrick Trägårdh/TT
V: Taageerada ardayda oo kor loo qaadey 300 oo koronka Sweden
Xaaladda guryaha oo ka soo hagaagaysa
La daabacay måndag 28 augusti 2017 kl 14.55
Laga bilaabo dayrta foodda innagu soo haysa ee sannadka dambe ayuu bilaaban doonaa kor u qaadis dhaqaalaha taageero ee ardeyda 300 oo koron bishiiba, sida uu axaddii ku sheegay khudbaddiisii kuleeylaha, hoggaamiyaha xisbiga Vänster Partiet Jonas Sjöstedt.
–Sidaa ayaa lagu heleyaa dakhli dheeri ah oo aan kordhineyn deynta ardey-nimo. Ardeyda ayaa heli doonta dakhli ka wanaag-san, iyadoona uu yaraanayo dareenkii lagu khasbanaa in la shaqeeyo oo lagu jiro wax-barasho buuxda iyo in tacliinta la sii wato. Nolol maalmeedka ayaa uga sahlanaan doona ardeyda iyada oo la heli doono ardey kala duwan oo ka soo kala jeedda qowmiyado kala duwan, sida uu sheegay Jonas Sjöstedt.
Intii uu ku guda jiray khudbaddiisii kuleeylaha ee uu ka akhriyay magaalada Umeå hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt wuxuu shaaca ka qaaday in ardeydu heli doonaan dhaqaale dheeri ah 300 oo koron bishii laga bilaabo bisha agoosto ee sannadka foodda innagu soo haya ee 2018.
Qorshahan ayaa ku kici doona dhaqaale gaarsii-san hal bilyan oo koron sannadkii oo xisbiga V uu heshiis kula galay wada-hadalka miisaaniyadda dawladda.
Intaa wixii dheer ayuu Sjöstedt khudbaddiisa kaga hadlay fikirka xisbiga isagoona ku bilaabay baahida guri la’aanta iyo saameeynta faqooqa oo ey middaasi ku leedahay dhallinyarada.
–Way sahlan tahay in la dareemo guul-darro mar haddii uu wakhtigu socdo oo aan la helin hooy la dego.
–Siyaasiyiinta ka dambeeysa siyaasaddan waxey lahaayeen filooyin iyo dabaqyadooda, su’aashu waxay tahay iney fahan-sanaayeen micnaha in aan la helin hooy la dego. Waa ballaan fur, sida uu sheegay.
Åkesson oo doonaya inuu noqdo dareenka dawlad garabka midig
Björklund oo xoogga saaray is dhex galka iyo dhimista faqooqa maalka